कसरी एक संघर्ष Royale खाता रिकभर गर्न को लागी मोबाइल फोरम
कसरी एक Clash Royale खाता रिकभर गर्न को लागी
क्रिस्टियन गार्सिया | 23/09/2021 09:51 | खेल
टकराव रोयाल २०१ 2016 देखि एक ठूलो सक्रिय खेलाडी आधार संग एक धेरै सफल भिडियो खेल भएको छ। यही कारण हो कि यदि तपाइँ धेरै घण्टा समर्पित गर्नुभयो - र पैसा - भिडियो खेल को लागी, तपाइँ कुनै पनी परिस्थितिमा तपाइँको खाता गुमाउन चाहनुहुन्न। यदि तपाइँ एक लामो समय को लागी खेल्नुभएको छैन भने पनि। यही कारणले यो सम्भव छ कि यदि तपाइँ यसको साथ एक समस्या छ तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कसरी Clash Royale खाता रिकभर गर्ने। चिन्ता नगर्नुहोस् वा शर्मिंदा नहुनुहोस् किनकि यो समय समयमा हामी सबैलाई भएको छ र यो सामान्य हो कि तपाइँ यसलाई ठीक गर्न चाहानुहुन्छ।
कहिलेकाहीँ हामी गलत बटन पनि पाउँछौं र तपाइँ तपाइँको टाउको मा तपाइँको हात लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ बिल्कुल तपाइँको सबै प्रगति गुमाउनु भएको छ, तर यो त्यस्तो छैन। त्यसोभए यदि तपाइँ सोचिरहनुभएको छ कि कसरी तपाइँको संघर्ष रोयाले खाता पुन: प्राप्ति गर्ने, चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यो मुख्य विषय हो कि हामी संग सम्झौता गर्न जाँदैछौं। हामी कसैलाई आफ्नो खाता र मुकुट बिना छोड्न चाहन्छौं। कि हामी सबै यहाँ खेलेका छौं र हामी जान्दछौं कि कती मेहनत यो एक राम्रो सेटअप प्रतिस्पर्धा गर्न र सीढी चढ्न को लागी लाग्छ।
चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि सौभाग्य देखि यो धेरै सजीलो तपाइँ तपाइँको खाता र तपाइँको आफ्नै खाता मा थियो र अधिक बाट पुन: प्राप्ति गर्न को लागी यदि यो दुर्घटना बाट हो। Supercell मा मानिसहरु, विकासकर्ताहरु, खाता मा यी सबै अप्रत्याशित घटनाहरु उठ्न सक्छन् र यही कारण छ कि त्यहाँ राम्रो तरिकाहरु छन् कि हामी तल को बारे मा बताउन जाँदैछौं। तपाइँ मिनेट को एक मामला मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, त्यहाँ जाऔं, त्यहाँ फेरि संघर्ष रोयाल खेल्ने इच्छा हुनेछ, हैन?
1 Clash Royale खाता कसरी रिकभर गर्ने?
1.1 के म निष्क्रियताको कारण मेरो खाता गुमाउन सक्छु?
1.2 आधिकारिक वेबसाइट बाट Supercell सम्पर्क गर्नुहोस्
Clash Royale खाता कसरी रिकभर गर्ने?
आदेश मा तपाइँको टकराव रोयाल खाता रिकभर गर्न र यो धेरै सरल बनाउन को लागी, हामी तपाइँलाई सूचित गर्दछौं कि यदि तपाइँ यो हुनुहुन्छ तपाइँको अन्य गुगल प्ले स्टोर खाता, खेल केन्द्र वा फेसबुक संग सम्बद्ध। यदि यो मामला होईन, हामी तपाइँलाई निम्न को पछि लाग्न को लागी अन्य चरणहरु दिनेछौं, किनकि हामीसंग त्यो खाता सम्बद्ध वा लि have्क छैन, तपाइँ खाता पुनर्स्थापना गर्न को लागी, डेवलपर्स, SuperCell लाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाइँ विकासकर्ताहरु लाई सम्पर्क नगरी यसलाई ठीक गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ तलका चरणहरु को पालन गर्नु पर्छ:
सुरु गर्न को लागी, भिडियो खेल स्क्रीन मा सेटिंग्स खण्ड मा जानुहोस्। अब विकल्प छान्नुहोस् मद्दत र सहायता। यो भित्र तपाइँ खेल स्क्रिनमा सेटिंग्स आफैंमा पाउनुहुनेछ, त्यहाँ आफैंलाई पत्ता लगाउन तपाइँ खाताको तपाइँको सबै ट्राफीहरु हुनेछ। अब सेटिंग्स भित्र तपाइँ तल मा एक नजर राख्नु पर्छ र तपाइँ फेरि मद्दत र सहायता पाउनुहुनेछ।
के तपाइँ यसलाई भेट्टाउनुभयो? ठीक छ अब हामीलाई सम्पर्क गर्न जानुहोस्। तपाइँ यसलाई विन्डो को शीर्ष मा तपाइँ पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ एक समस्या बिना यो भेट्टाउनुभएको छ, अर्को विकल्प देखा पर्नेछ, जो "हराएको खाता" हो वा यदि यो अंग्रेजी "हराएको खाता" मा देखिन्छ। पहिलो विकल्प छान्नुहोस् र अब यो भित्र, प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् यदि यसले तपाइँलाई मद्दत गरेको छ। यो कसरी तपाइँ सम्पर्क फाराम को पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ कि SuperCell हामीलाई प्रदान गर्दछ। अब तपाइँ मात्र तपाइँको जानकारी र तपाइँको मामला भर्नु पर्छ। तपाइँ उनीहरु संग सम्पर्कमा रहनुहुनेछ र सौभाग्य देखि तपाइँ र तपाइँको खेल्न को लागी इच्छा को लागी, विकासकर्ता कम्पनी बाट मानिसहरु सामान्यतया छिटो जवाफ दिन्छन्।
पीसी को लागी क्लेश रोयाल डाउनलोड गर्न को लागी पूर्ण सित्तै
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ तपाइँको प्रकार को डेटा संकेत गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता नाम, तपाइँको कबीला, तपाइँको सटीक खाता स्तर, ट्राफीहरु, र कुनै पनी अतिरिक्त विवरण कि तपाइँ उनीहरुलाई प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो उनीहरुलाई देख्न को लागी कि तपाइँ उक्त खाता को मालिक हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँ कुनै शंका छैन।
सामान्य को रूप मा, Supercell को मानिसहरु असफल हुँदैनन् र हामी उनीहरुलाई आश्वासन दिन्छौं कि उनीहरु लाई सामान्यतया एक धेरै छिटो र प्रभावी सहायता र समर्थन टीम छ। यो सत्य हो कि उनीहरु काम को एक उच्च स्तर हुन सक्छ र कि उनीहरु सामान्य भन्दा अलि लामो समय लिन्छन् तर ढिलो वा चाँडो उनीहरु तपाइँलाई जवाफ दिनेछन् कि नडराउनुहोस्। यदि केहि दिनको कुरा मा केहि हुदैन तपाइँ ड्रेगनहरु फेरी टावरहरु लाई फ्याँक्नुहुनेछ। चिन्ता नगर। यस संगै हामी पहिले नै कसरी Clash Royale खाता रिकभर गर्ने को लागी प्रश्न को उत्तर दिईएको हुन्छ। तर मात्र मामला मा हामी अर्को ठाउँ बाट हामी Supercell लाई सम्पर्क गर्न सक्छौं हेर्न जाँदैछौं।
के म निष्क्रियताको कारण मेरो खाता गुमाउन सक्छु?
Supercell बाट सिद्धान्त मा उनीहरु त्यो आश्वासन दिन्छन् यो सम्भव छैन कि खाता को हानि निष्क्रियता को कारण थियो। तेसैले यदि तपाइँ त्यो मुद्दा को बारे मा कुनै प्रश्न छ, यो समाधान गरीएको छ। अब तपाइँ Clash Royale भिडियो खेल खेल्न बन्द, तपाइँ त्यो कारण को लागी तपाइँको खाता कहिल्यै गुमाउनु हुने छैन। चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाइँको खाता सधैं अन्य खाताहरु जस्तै गुगल प्ले स्टोर, फेसबुक वा अन्य कि हामी अघिल्लो अनुच्छेद मा उल्लेख गरीएको छ संग जोडिएको हुनेछ। तपाइँ सधैँ Supercell लाई सम्पर्क गरेर यसलाई रिकभर गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तेसैले यदि तपाइँ सोचिरहनु भएको छ कि कसरी Clash Royale खाता को लागी सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाइँ यसलाई निष्क्रियताको कारणले हराउनु भएको थियो, यो गलत छ।
हामी माथिको सुपरसेल को मानिसहरु लाई सम्पर्क गर्न को लागी अन्तिम तरीका देख्न जाँदैछौं यदि तपाइँले मद्दत गर्नुभएको छैन।
आधिकारिक वेबसाइट बाट Supercell सम्पर्क गर्नुहोस्
हामी भन्यौं, त्यहाँ सरकारी सेवा वा सम्पर्क गर्न को लागी अर्को तरीका छ प्राविधिक समर्थन धेरै छिटो तपाइँको संघर्ष Royale खाता पुनःप्राप्त गर्न। यदि तपाइँ संघर्ष रोयाल को आधिकारिक वेबसाइट को माध्यम बाट जानुहुन्छ तपाइँ केहि चरणहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले मात्र अघिल्लो एक जस्तै एक फारम भर्नु पर्छ। यस फारममा तपाइँ खेल, भाषा जसमा तपाइँ खेल्नुहुन्छ, श्रेणी (त्यहाँ तपाइँ संकेत गर्नुहुनेछ कि तपाइँ तपाइँको खाता गुमाउनु भएको छ) को रूप मा छनौट गर्न को लागी, तपाइँको प्रयोगकर्ता नाम / खाता ठ्याक्कै र ठीक लेख्नुहोस् र उनीहरुलाई सम्पर्क गर्न को लागी एक ईमेल ठेगाना। यस तरीकाले तपाइँ आफ्नो खाता रिकभर गर्न Supercell लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
पीसीको लागि ब्राल स्टारहरू कसरी डाउनलोड गर्ने र स्थापना गर्ने
यदि तपाइँ भिडियो खेल को बारे मा कुनै प्रश्न छ, तपाइँ पनी आधिकारिक वेबसाइट को त्यो खण्ड को लाभ लिन सक्नुहुन्छ। किनकि उनीहरु लाई सहायता नामक खण्ड छ जसमा तपाइँ अरु केहि मा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। यो तिनीहरूको काम हो र उनीहरु सकेसम्म चाँडो तपाईहरु को लागी उपस्थित हुनेछन्। तपाइँ यसलाई तल, बायाँ तिर पाउनुहुनेछ। यसको कुनै घाटा छैन।
आह हो, त्यहाँ बाट तपाइँ पनी कुनै पनी खेल मा समस्या को समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। एक असफल बिलि purchase खरीद बाट लगभग अरु केहि गर्न को लागी। तपाइँ समस्या रोशनी भिडियो खेल र तपाइँको खाता को बारे मा उठ्ने समस्याहरु वा प्रश्नहरु को धेरै को उत्तर प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
अब तपाइँ जान्नुहुन्छ कसरी कुनै समस्या बिना Clash Royale खाता रिकभर गर्न को लागी। हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख तपाइँको लागी मद्दत को लागी भएको छ र अब देखि कुनै पनि खाता गुमाउन को लागी डराउनु पर्दैन, कि यो जीवन मा सबै कुरा को एक समाधान छ। टिप्पणी मा छोड्नुहोस् यदि उनीहरु समस्या को समाधान गरीएको छ र कति समय सम्म यो तपाइँ संग सम्पर्क मा लिन को लागी लाग्यो। तेसैले हामी देख्न सक्छौं कि उनीहरु सुपरसेल समस्याहरु लाई हल गर्न मा कती प्रभावी छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » खेल » कसरी एक Clash Royale खाता रिकभर गर्न को लागी
कसरी मुक्त गर्न को लागी Habbo क्रेडिट कमाउन को लागी
एक फोन नम्बर कि मलाई रोकिएको छ कसरी कल गर्ने